Ny mahasamihafa ny ba kiraro fanatanjahan-tena sy ny ba kiraro mahazatra
Ny nozaraiko taminao androany dia ny mahasamihafa ny ba kiraro fanatanjahan-tena sy ny ba kiraro mahazatra. Rehefa miresaka momba ny lohahevitra androany i Ubuy, mino aho fa olona maro no hanana fisalasalana. Ny ba kiraro dia matetika no mitafy tsara, maninona aho no misafidy ba kiraro fanatanjahan-tena rehefa manao fanatanjahan-tena? Ba kiraro daholo? Inona no mahasamihafa azy? ...
Soso-kevitra sasany ho an'ny lehilahy hisafidy ba kiraro ho an'ny lehilahy
Misy milaza fa ny ba kiraro no hoditra faharoa an'ny lehilahy. Ny fanaovana ba kiraro mety amin'ny fotoana mety dia siansa tokoa. Ny fitsipika lehibe indrindra tokony hataon'ny lehilahy ba kiraro dia ny fanamafisana ny lalao ankapobeny. Amin'ny tranga maro, ny pataloha lava dia hanarona mivantana ny ambony. Ny tsy nahy fotsiny ca ...
Ho avy ny fararano！ Ahoana ny fisafidianana stockings avo lenta
Efa manakaiky ny fararano ary vanim-potoana fanaovana stockings. Ahoana no hisafidianan'ireo vehivavy tia hatsaran-tarehy stockings avo lenta? Milaza aminao i Ubuy fa mora ny mahafehy ireo singa telo ary misafidy kiraro ba kiraro lamaody sy avo lenta! 1. Jereo ny kalitaon'ny fisehoan'ny sock Ny firs ...
Fanadihadiana momba ny satan'ny fampandrosoana ny tsenan'ny indostria kiraro an'i Shina amin'ny taona 2020
Nanjary firenena mpanamboatra ba kiraro lehibe i Shina niaraka tamin'ny fanondranana isan-taona mihoatra ny 16 miliara tsiroaroa Ny indostrian'ny famokarana ba kiraro dia niainga tany Eropa sy Amerika, toy ny indostria hafa. Miaraka amin'ny fanamafisana ny fanatontoloana ara-toekarena, ny fironana amin'ny fizarazarana ny asa iraisam-pirenena amin'ny ...
Ahoana ny fomba hisafidianana atin'akanjo fanatanjahan-tena？
avy amin'ny admin tamin'ny 20-06-08
1. Safidio ny lamba mety atin'akanjo fanatanjahan-tena tsara dia mety ho maivana, mora hosasana, tsy mahazaka, ary tsy misy hatsembohana, tondro polyester ary lamba nilona no tolo-kevitra. Izy ireo dia afaka mahafeno ireo fenitra voalaza etsy ambony ary hahatonga anao hahazo aina kokoa rehefa manao fanatanjahan-tena. 2. Safidio ny fomba araka ny kapoaka In gene ...
Efa naheno momba ba kiraro falifaly ve ianao? Tamin'ny taon-dasa dia nivarotra ba kiraro 100 tapitrisa euro
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-04-16
Angamba ny olona sasany dia tsy mahazatra ny Happy Socks. Ny marika dia naorina tany Suède tamin'ny taona 2008, nivoaka tanteraka tamin'ny hevitra suden avy tamin'i Mikael Söderlindh sy Viktor Tell. Hitan'izy ireo fa ny sasany amin'ireo ba kiraro mazava sy vita pirinty eny an-tsena (ny ankamaroan'izy ireo dia natao pirinty tamin'ny lohan'i Simpson) dia saika ...
Drafitra fanodinana ankapobeny ho an'ny ba kiraro
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-04-11
(I) Dingana fanamboarana ankapobeny ho an'ny ba kiraro: 1. Famolavolana sock-Fitaovana akora sy fanamafisana ny lokon'ny volon'ondry- Fampiharana sock-Fanamboarana asa-tanana 2. Famokarana vatan-kazo -y eo ambany –Fizahana ny masinin-jiro-famolavolana-famolavolana fanoratana –packing (2) Ny dingana manokana fanenomana ny ...